FURSAD FAKATAY: MW Farmaajo oo heli karay muddo kororsi macquul ah iyadoo aan Khayrre la tuurin | Hadalsame Media
”Ma gaal baa wax noo sheegaya?!” – ”Gaal kuu sheegi maayee…
Home Maqaallada FURSAD FAKATAY: MW Farmaajo oo heli karay muddo kororsi macquul ah iyadoo...
FURSAD FAKATAY: MW Farmaajo oo heli karay muddo kororsi macquul ah iyadoo aan Khayrre la tuurin
(Hadalsame) 28 Luulyo 2020 – Xilka xayuubintii boobsiiska aheyd ee Baarlamaanka Kalsoonida kala noqdeen Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyo Madaxweyne Farmaajo isagoo adeegsanaya Gudoomiye Mursal iyo ku xigeenkiisa Muudeey si uu u helo fursad muddo kororsi.
Waxaa ugu dambeesay khudbadii uu ka jeediyay shirkii ka dhacay magaalada Dhuusomareeb halkaa oo dhamaan madaxda maamul Goboleedyada, Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha isugu imaadeen.
Farmaajo wuxuu ku celceliyay inuu doonayo doorasho qof iyo cod ah isagoo raba inuu meesha ka saaro doorasho dadban , wuxuuna hadalkiisa raacinayay “Waxaan u baahanahay wax aan ku faano ma taagnaan karo halkii 2016.”
Ra’isul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa la fahansan yahay inuu ka dambeeyay isu imaatinka Dhuusomareeb, door aad u weynna ayuu ka ciyaaray isagoo kal hore sii cadeeyay in doorashada waqtigeeda ku dhaceyso waliba iyadoo laga heshiiyay wuxuuna si dad ban meesha uga saaray doorasho qof iyo cod ah iyo rabitaanka muddo kororsi ee Farmaajo.
Maadaama hadda loo ballansanaa shirka Dhuusomareeb3 iyadoo kii Dhuusomareeb2 la isku raacay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, oo hadana laga war sugayo Guddiyo farsamo oo ka shaqeeya nuuca doorasho ee la isla qaadan karo ayaa hadana lagu waayay fursadda uu raadinyo Madaxweynaha.
Waxaa banaanka yimid qorshahii muddo kororsiga ahaa ee muddo uu ku taamayay balse ma muuqato hal waddo oo u suuragelin karta, waxaana suuragal ah inuu aqbalo codsiyo dhinacyo badan ka socda taa oo ah in Mahdi Guuleed uu shaqada sii dhameystiro islamarkana la aado doorasho dadban si looga fogaado Ra’isul Wasaare cusub oo shaqada aan fahansaneyn.
Previous articleGOOGOOSKA: Parma vs Atalanta 1-2
Next articleGOOGOOSKA: Inter Milan vs Napoli 2-0
”Ma gaal baa wax noo sheegaya?!” – ”Gaal kuu sheegi maayee garaadkaagu hakuu sheego inaadan KUFSI qabyaalad ku difaacin!!
(Hadalsame) 09 Agoosto 2020 - Maxay ahayd dooddaan maanta iyo caawa baraha bulshada ka oogan? Waxaan arkay dad xiiqsan oo oranaya "waxaan gaalo ayaa wadata,...